नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुन्छ : प्रा.डा. लोकराज बराल, पूर्वराजदूत
० नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूत मनजीभ सिंहले काम सम्हाल्नुभएको छ । भारतले यसपटक पञ्जावी समुदायका व्यक्तिलाई नेपालको राजदूत पठाउनुलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
— पञ्जावी समुदायका व्यक्तिलाई नेपालको राजदूत बनाउनुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन । जहाँसम्म भाषाको कुरा छ । उहाँले पनि हिन्दी बाल्नुहुन्छ । जहाँसम्म शैलीको कुरा छ । शैली त व्यक्ति–व्यक्तिमा फरक हुन्छ । त्यसैले बिहार र उत्तर प्रदेशका व्यक्तिलाई नेपालको राजदूत बनाउनु र पञ्जावी व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा खासै त्यस्तो फरक पर्दैन ।
० विगतमा बिहार र उत्तर प्रदेशका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्दै आएका थिए । यसपटक नेपालको नजिकका प्रदेशभन्दा टाढाका व्यक्तिलाई भारतीय राजदूत बनाउनुको कारण के होला ?
— कुनै राजदूतले भए पनि भारत सरकारको नीतिअनुसार नै काम गर्छन् । यहाँका कुरालाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँका सरकारलाई ब्रिफिङ गर्ने राजदूतको कर्तव्यभित्र पर्छ । अहिलेका राजदूत पनि आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बढी सक्रिय हुने जस्तो लाग्दैन । सबैको काम गर्ने शै ीभने फरक हुन्छ । तर, तात्विक भिन्नता हुँदैन । कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै राजदूतको जन्मस्थानले खासै फरक पार्दैन । उहाँ बिहार र यूपीका नभएकै कारण नेपाल र भारतको कूटनीति सम्बन्धमा कुनै असर पर्छ भन्ने छैन । यसअघि पनि थुप्रै राजदूत बिहार र यूपी थिएनन् । हुन त बिहार र यूपीका व्यक्ति पनि नेपालका लागि राजदूत भएका छन् । तर, त्यो संयोग मात्र हो । जस्तो, शिवशंकर मुखर्जी, श्यामशरण, रञ्जित रे, जयन्तप्रसादलगायत यस क्षेत्रका थिए । यो संयोग मात्र हो । जुन प्रदेशका भए पनि नेपालका बारेमा बुझेका व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाइन्छ ।
० पूर्वराजदूत रञ्जित रेको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
— सबैको काम गर्ने शैली केही फरक हुन्छ । यसका साथै नेपालको त्यसबेलाको परिस्थिति र पस्थितिले पनि उनीहरूको काममा असर पार्छ । कुनै न कुनै रूपमा नेपालका आन्दोलनहरू र यसबाट हुने परिवर्तनमा पक्कै पनि छिमेकी मुलुकको राजदूतको भूमिका हुन्छ । भारतले नेपालका लागि दुई खम्बे नीति लिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई लिइएको थियो । तर, आन्दोलन सफल हुँदै गएपछि भारतले पनि आफ्नो नीति परिर्वतन ग¥यो । त्यसकारण समय पस्थितिअनुसार नै नीतिहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् । नीति स्थायी हुँदैन । तर, मूलभूत नीतिमा खासै परिर्वतन हुँदैन । जस्तो भूराजनीतिमा त्यति फरक पर्दैन । शिवशंकर मुखर्जी र श्यामशरणका बेला नेपालमा विभिन्न परिवर्तनहरू भएका थिए । हो, राकेश सुदका बेला अलि समस्या देखिएको थियो । तर, यहाँ राकेश सुदलाई त्यति बुझ्ने कोशिस नै भएन । विशेष गरी माओवादी त राकेश सुदप्रति आक्रामक नै थियो । जहाँसम्म राजदूत रञ्जित रेको कुरा गर्ने हो भने उहाँको कार्यकाललाई सफल नै मान्नुपर्छ । उहाँ नम्र स्वभावका राजदूत थिए । उहाँ साधारण प्रकृतिको व्यक्ति हो । तर, उहाँलाई पनि विवादमा पारियो ।
० प्रायः भारतका राजदूतहरू विवादित हुने गरेका छन् । उनीहरू विवादमा पर्छन् कि पारिन्छ ?
— यहाँ कस्तो छ भने, चीनको कुरा हुँदा त्यति टिकाटिप्पणी हुँदैन । तर, भारतको विषय जोडिएको सानो कुरामा पनि धेरै हल्ला हुने गरेको छ । भारतले जतिसुकै राम्रो गरे पनि अविश्वास गर्ने परिपाटी यहाँ देखिन्छ । जुनसुकै व्यक्ति राजदूत बनेर आए पनि विवादमा तानिन्छन् । तर, त्यसको प्रतिशतमा मात्र तलमाथि हुने हो । खासमा नेपालमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । सकारात्मक सोच नै छैन । जेको पनि गलत अर्थ लगाइन्छ । नेपालमा स–साना कुरा भयो भने पनि त्यो भारतले नै गराएको आरोप लगाइन्छ । कुनै–कुनै विषयमा आरोप सही पनि हुन सक्छ । तर, धेरै विषयमा झूठो आरोप लगाइन्छ । यसरी असमझदारी बढाउने काम राजनीति क्षेत्रबाट भइरहेको छ । हरेक कुरामा राष्ट्रवादको कुरा गरिन्छ ।
० हरेक कुरामा भारतमाथि आरोप लगाउने गरिन्छ । आरोपमा कत्तिको सत्यता छ जस्तो लाग्छ ?
— सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने हामी आफैं कुनै कुनै कुरामा हस्तक्षेपका लागि भारतलाई निमन्त्रणा दिने गर्छौं । नेपालमा आन्दोलन चलाउनु प¥यो भने भारतलाई निमन्त्रणा दिने काम पहिले देखि नै हुँदै आएको छ । २०४६ सालमा भारतका नेताहरूलाई गणेशमान सिंहको घरमा बोलाएको पनि सबैलाई थाहा छ । त्यसबेला चन्दशेखरलगायतका नेताहरू नेपाल आएका थिए । आन्दोलनमा बल पुग्यो । परिवर्तनमा सघाउ पुग्यो । त्यस्तै, माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने कुरामा पनि भारतको सहयोग लिइयो । यस्ता कुरामा हामी आफ्नो भारतलाई हस्तक्षेप गर्न भन्छौं । समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्छौं । त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका लागि पनि भारतसँग गुहार गरिन्छ । त्यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको हो । हामी भारतविरोधी नभई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक छ ।
० नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप मजबुत पार्न नयाँ राजदूतको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ ?
— पहिलो कुरा सोच परिवर्तन आवश्यक छ । यो दुवैतर्फबाट आवश्यक छ । भारतले पनि ब्रिटिश पालाको सोच राखेर हुँदैन । त्यस्तै, नेपालीहरूले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कसरी व्यवस्थित गर्ने यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई व्यावहारिक भएर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले अब नयाँ किसिमबाट चल्नुपर्छ । सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्यो भने अहिलेको शंका उपशंका कम हुन्छ । आशा गरौं अहिलेको राजदूतले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २०७३।१२।१८ गते शुक्रबार